Otu esi etinye ihe nchọgharị Opera na Fedora 35 - LinuxCapable
November 3, 2021 by Jọshụa James
Mepụta & Bubata ebe nchekwa Opera
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye ihe nchọgharị Opera na Fedora 35.
Site na ndabara, Opera Browser anaghị esonye na ebe nchekwa Fedora ọkọlọtọ. Agbanyeghị, ị nwere ike mepụta ngwa ngwa wee bubata ebe nchekwa gọọmentị na sistemụ gị site na ime ihe ndị a.
Nke mbụ, mepụta ma mepee faịlụ nchekwa site na iji editọ ederede ọ bụla:
Na-esote, detuo na mado ndị na-esonụ.
Ozugbo emechara, chekwaa faịlụ ahụ CTRL + O wee pụọ na CTRL + X.
Mara, nke a ga-ebubata igodo GPG maka nrụnye. Ọ bụrụ na GPG anaghị ebubata n'ihi ihe ụfọdụ, jiri aka na-eso bubata ya:
ụdị "Y," wee pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na ntinye.
Iji wụnye Opera Browser Beta:
Iji wụnye Opera Browser Developer:
Ekele, ị tinyela Opera Browser.
Ka imelite, mee ihe dnf nweta ume n'ọnụ ọnụ gị ka ị ga-elele sistemụ gị niile maka mmelite ọ bụla, gụnyere site na ebe nchekwa Opera.
Ekwesịrị ịme nke a ugboro ugboro ka enwere ike.
Iji wepu Opera Browser, mebie iwu njedebe a. Cheta iji beta ma ọ bụ onye nrụpụta dochie ụdị kwụsiri ike ma ọ bụrụ na ị na-eji nhazi ọzọ.
Ihe atụ (iwepụ opera-stable):
Rịba ama, a ga-ewepụkwa ndabere na-ejighị ya. Fo
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi ebubata ebe nchekwa Opera n'ime listi isi iyi dnf wee wụnye ihe nchọgharị weebụ site na ịhọrọ ma ọ bụ nke kwụsiri ike, beta, ma ọ bụ alaka ndị mmepe.
N'ozuzu, Opera na-eji igwe na-emepụta ibe Chromium, yabụ ị gaghị enwe ike ịbanye na saịtị enweghị ndakọrịta. Ịrụ ọrụ ngwa ngwa, ikekwe ọ bụghị oriri na ubi. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-edobe nke ya ma nwee atụmatụ pụrụ iche nke na-eme ka nke a bụrụ ihe ọzọ mara mma maka ọtụtụ ndị ọrụ Linux bụ ndị na-achọ ihe dị iche ma e wezụga Firefox nke na-abịa na ọkọlọtọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe Linux niile.
Categories Fedora Tags Fedora 35, Opera Nchọgharị Mail igodo